Rikoooo.com - Fahatongavana mahatalanjona sy mahery fo amin'ny tantara.
Mahagaga sy feno herim-po landings amin'ny alalan'ny tantara.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 27 feb 2017, 22:50
1. 12 Jona 1972 (American Airlines Flight 96)
Ny Kapiteny Bryce McCormick dia nitondra soa aman-tsara tamin'ny fiaramanidina taorian'ny fivoahana tampoka ny varavaran'ny entana. Tsy nisy tamin'ireo mpandeha naratra.
2. 24 Jona 1982 (sidina British Airways)
Ny Kapiteny Roger Greaves dia nanalavitra ny fiaramanidina an-jatony taorian'ny fiara efatra izay tsy nahatonga ny volokano lavenona tamin'ny fipoahan'ny Tendrombohitra Galunggung.
3. 23 Jolay 1983 (sidina Air Canada 143)
Ny kapitenin'i Bob Pearson, mpanamory fiaramanidina za-draharaha, dia namonjy ny mpandeha rehetra tao anaty fiaramanidina tao anaty fiaramanidina tamin'ny alàlan'ny fandefasana ny fiaramanidina taorian'ny famafazana fametavetana mamoaka ny fahaverezan'ny fahefana elektronika rehetra.
4. 28 aprily 1988 (Aloha Airlines Flight 243)
Ny pilot Robert Schornstheimer dia nitondra ny fiaramanidina tao amin'ny 13 minitra taorian'ny nipoahan'ny fanapoahana baomba ny ampahany lehibe tamin'ny tafo. Clarabelle Lansing, nisy mpitsoa-ponenana nalefa teo amin'ny sezany; Ny mpandeha 90 hafa dia tsy naratra.
5. 10 Jona 1990 (sidina British Airways 5390)
Ny mpiara-dia, Alastair Atchison, dia nitondra fiaramanidina safidy taorian'ny tsy fahombiazan'ny fiara fitaratra amin'ny rivotra. Ny kapitenin'i Tim Lancaster dia teo anelanelan'ny kamiao ary tsy afaka nifehy ny fiaramanidina.
6. 17 Janoary 2008 (BA Flight 38)
Ny pilot John Coward dia nahavita nidina fiaramanidina iray taorian'ny tsy fahombiazan'ny fitaovam-pitaterana naterak'ireo kristaly glasa tao anaty fiaramanidina solika izay, indraindray, dia nahatonga ny famerana ny fivoahan'ny solika.
7. 15 Janoary 2009 (sidina US Airways 1549)
Ny kapitenin-tsambo Chesley Sullenberger III dia nitondra fiaramanidina soa aman-tsara tao amin'ny reniranon'i Hudson taorian'ny nanesorana andian-jiolahim-borona Kanadianina ny fiaramanidina.
8. 13 aprily 2010 (sidina Cathay Pacific 780)
Ireo Pilotsin'i Malcom Waters sy David Hayho dia nitondra fiaramanidina avo roa heny noho ny haavon-tsainy araka ny tsy fahafahan'ny fiovana.
9. 4 Novambra 2010 (Sidina Qantas)
Ny Kapiteny Richard Champion de Crespigny dia nandefa ny fiaramanidina A380 rehefa nipoaka ny motera 2, nanimba ny elatra iray ary nahatonga ny tafio-drivotra. Ireo mpandeha rehetra tao anaty 469 dia tsy naratra mihitsy.
10. Ny kapitenin'ny Flybe izay nianjera ny sandriny
Nofintininay tamin'ny fanamarihana bitika kely. Ny fitrandrahana anaty feon-javatra mampihetsi-po dia fihenam-bidy kely ho an'ny mpanamory. Tena olana goavana izany raha vao tapitra ny sandrinao. Izany indrindra no nitranga tamin'ny kapiteny Flybe iray tao amin'ny 2014. Fotoana fohy talohan'ny fiakarana, dia "nesoriny teo amin'ny ziogan'ny zioga ny kibony, tsy navelany hifehezana ny fiaramanidina", hoy ny tatitra nataon'ny sampan-draharahan'ny fanadihadiana iray misahana ny loza.
Tsy voatonona etsy ambony, tsy mahafantatra ny antony ...
Aogositra 24, 2001
Air Transat Flight 236 dia fiaramanidina mifindra ho an'ny Lisbonne, Portiogaly, avy any Toronto, Ontario, Kanada, izay namoy ny heriny manontolo rehefa nanidina ny Oseana Atlantika tamin'ny Aogositra 24, 2001. Ny Airbus A330 dia nizaka fahaverezan'ny herinaratra noho ny fivoahana solika vokatry ny fikojakojana tsy mety. Ny kapitenin'i Robert Piché, 48, mpanamory fiaramanidina za-draharaha, ary ny mpiandraikitra voalohany, Dirk de Jager, 28, dia nanidina ny fiaramanidina mba hahatongavana tany amin'ny Azores mahomby, hamonjy ny olona rehetra 306 (mpandeha 293 sy ekipa 13). Ny ankamaroan'ireo mpandeha sidina dia ny Kanadianina nitsidika ireo mpivarotra Eoropeana sy Portiogey miverina mitsidika fianakaviana any Portiogaly. Tao amin'ny 19 minitra dia nanidina ny seranam-piaramanidina i Piché sy De Jager raha tsy teo ny fahefana 120 km (75 kilaometatra), mihoatra noho ny mpandeha mpandeha rehetra teo amin'ny tantara. Ny rakitra teo aloha dia napetraky ny mpanamory fiaramanidina Kanadiana, nandritra ny tranga malaza 1983 Gimli Glider
Enga anie 24, 1988
TACA Flight 110 dia fiaramanidina fiaramanidina iraisam-pirenena nomanin'ny TACA Airlines, avy any Belize hatrany New Orleans. Tamin'ny May 24, 1988, ny Boeing 737-300 dia nahavery hery tamin'ny fitaovana anankiroa, saingy ny mpanamory fiaramanidina dia nanao fihenam-bidy mahatsiravina teo amin'ny valan-javaboahary iray, ka tsy nisy olona naratra noho ny fanimbana kely. Ny kapitenin 'ny sidina, Carlos Dardano avy any El Salvador, dia nanary ny masony hiampita amin'ny fiaramanidina kely mankany El Salvador, izay niatrika ady an-trano tamin'izany fotoana izany.
Loharano: Ireo Aviators, Wikipedia
Ny mpanamory fiaramanidina an'habakabaka mahery indrindra 10 amin'ny fotoana rehetra
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Colonelwing » 27 feb 2017, 23:16
Tsy tokony hanao tantara lehibe avy amin'io ", Cpt Robert Piché avy any Ait-Transat fantatro azy manokana.
Isika dia avy amin'ny fianarana mitovy taom-polo. Olona iray tapitrisa tena tezitra raha tsy maintsy mihaona aminy amin'ny ho avy ianao
raha toa ka miala amin'ny Air-Transat.
Eny ,, tontolo kely raha afaka miteny ianao ... Tontolo kely ny sidina!
Famotopotorana mipoapoaka amin'ny Air Air Transat 236
Izany dia avy amin'ny porofo ofisialy sy ny fampisehoana
Namokatra sarimihetsika tamin'ny fiainany & sidina AirTransat 236 ihany koa izy ireo.
Ankafizo ny sarimihetsika amin'ny tantara fototra iray.
Ny sarimihetsika izay maneho ny fiainan'ny filoham-baomiera AirTransat 236, Robert piché.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 28 feb 2017, 00:57
Mety hampiako ity lohahevitra ity ao amin'ny 'Amazing landings' ', noho izaho manana iray hafa hanampy:
Janoary 16, 2002
Garuda Indonezia Flight 421 dia fiaramanidina nomanin'ny Indoneziana carrier Garuda Indonezia mandeha amin'ny 625 km (388 mi) avy any Ampenan ka hatrany Yogyakarta. Tamin'ny volana Janoary 16, 2002, ny fiaramanidina dia nahitana hetsika mafy oram-baratra nandritra ny fotoana nanatonany ny toerana, nandoro ny lelafo tao anaty motera roa, ary nihozongozona tao amin'ny renirano midadasika iray, ka niteraka ratra sy ratra maro. Araka ny fiaramanidina nidina avy amin'ny rahona ambany kokoa teo amin'ny 8,000 m (2,400 m) teo ho eo, dia nahita ny reniranon'i Bengawan Solo ireo mpanamory fiaramanidina ary nanapa-kevitra ny hanandrana hikotrika ao amin'ny renirano miaraka amin'ny rambony sy ny fiaramanidina. Nahomby ny fomba fitiliana, namela ilay fiaramanidina niorina teo an-kibony tao anaty rano tsy misy rano, ary ny rambony, ny elany ary ny fanaraha-maso dia tsy afa-mihetsika. Tsy nisy afo.
Kolonelwing, raha mahita azy indray ianao, lazao azy fa misy mpankafy eto. Ny zavatra nataony, dia nanentana ahy hanadino ny dikan'ny hoe miala. Ary eny, izao tontolo izao.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Colonelwing » 28 feb 2017, 01:54
Izaho Davida dia
Aza avela velively na avelao ny sandrinao hidina, ny olana rehetra na ny asa toy ny vahaolana foana, tsarovy izany!
Manao asa tsara eto ianao @ Rikoooo ,, Tsarovy izany!